အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Moto X Play ကိုဝယ်ပါ Androidsis
ထိုအချိန်မှစ၍ စကားပြောရန်အများဆုံးပေးသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် မကြာသေးမီက Motorola ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှု, သံသယသစ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည် Moto X ကို Play စထိုကဲ့သို့သော စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Android စမတ်ဖုန်း အဆင့်မြင့် Android ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ Android အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးနှုန်း.
ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းကဒီနေ့မှကြေငြာဖို့ပါ ယခုအချိန်တွင် Moto X Play ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ စာမျက်နှာကိုယ်နှိုက်ကနေ Motorola ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့်အမေဇုံစပိန်။
ငါဒီကနေ့ကပြောသည် ယခုအချိန်တွင် Moto X Play ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီအနည်းဆုံး 16 GB Gb သိုလှောင်မှုပုံစံနှင့်အဖြူရောင်အကြောင်းပြောသောအခါ Amazon စပိန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်။ အခမဲ့ပို့ဆောင်စရိတ်နှင့်အတူ 347 ယူရို.
ဒါကမယုံနိုင်စရာကောင်းတာက 16 GB Gb သိုလှောင်မှုနဲ့အတူဗားရှင်းကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဒါပေမယ့်အနက်ရောင်၌တည်၏ဒါကဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားမယ် 384,90 ယူရို, အရာမှကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင် နီးပါး 40 ယူရိုပိုမြင့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ် ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရောင်နှင့်နောက်ကျောဖုံးတစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူတူတူနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ၏ terminal ကိုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်း၏ဗားရှင်းကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ် ဆီးနှင်းဖြူနောက်ကျောအဖုံးနှင့်အတူအဖြူအခြေခံအားဖြင့်တော့၊ အဖြူရောင်မော်ဒယ်များကိုငါပိုပြီးအနက်ရောင်မော်ဒယ်များထက်ပိုမိုခေတ်မီ။ ပျော်စရာကောင်းသောရှုထောင့်ဖြင့်မြင်သောကြောင့်အဖြူရောင်မော်ဒယ်များကိုပိုနှစ်သက်လေ့ရှိသောကြောင့်၊ အနက်ရောင်ထဲမှာ terminal ကိုနားမလည်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကုန်ကျသည်။
ဒီ Motorola Moto X Play အသစ်နှင့်၎င်းအပြင်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် ၅.၅″ FullHD မျက်နှာပြင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် IPX67 နှင့်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ 3630 mAh ဘက္ထရီ TurboPower15 လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ စွမ်းရည်သည် ၁၅ မိနစ်ခန့်အားသွင်းနိုင်ပြီး ၁၀ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ သံသယမရှိဘဲ, မီးမောင်းထိုးပြရန်အဓိကသီလတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်း၏ဖြစ်ပါတယ် ၂၁ mpx resolution ထက်မပိုသောနောက်ဘက်ကင်မရာသည် အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်ပင်အရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် terminal တစ်ခုမှာအနည်းဆုံးအဖြူရောင်ရှိသည့်မော်ဒယ်ဖြစ်သည် မယှဉ်နိုင်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ.
Moto X Play အသစ်ရရှိနိုင်မှု၏ဤသတင်းကိုအဆုံးသတ်လိုပါကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ကို Motorola တာဝန်ခံအားမေးခွန်းတစ်ခုပေးပို့လိုပါကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ Moto X Play ကအနက်ရောင်နဲ့ဘာကြောင့်ယူရို ၄၀ နီးပါးကျသင့်တာလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » ယခုအခါ Moto X Play ကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အနည်းဆုံးအဖြူရောင်ဖြစ်သည်။
သူတို့နှစ်ခုတူညီ, တူညီဒီဇိုင်းများဖြစ်လျှင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကဘာလဲ ပြောင်းလဲစေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်အရောင်ဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏စျေးနှုန်းကိုယူရို ၄၀ တိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။
ဘယ်လိုတူညီသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအနက်ရောင်မော်ဒယ်ကိုပိုမိုစျေးကြီးဖြစ်နိုင်သလဲ https://www.androidsis.com/ya-es-posible-comprar-el-moto-x-play-a-un-precio-imbatible/ #MotoXPlay Motorola
Mercy Saeta ဟုသူကပြောသည်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဖြူယူနစ်တွေ၊ အမည်းရောင်တွေ (သို့) တခြားမှောင်မိုက်တဲ့အရောင်တွေကိုရောင်းတာဖြစ်လို့အဖြူကအမြဲတမ်းပိုညစ်ပတ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာမိုဘိုင်းဖြူမရှိခဲ့ဘူးသော်လည်း၊ အတူတူပင်နှင့်€ 40 လျော့နည်းဘို့ဒါဟာတောင်မှသာလှ hahaha ကြည့်: p
၎င်းသည်စတော့ရှယ်ယာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ Amazon သည်ဤကဲ့သို့သောအရာများ၊ စတော့ရှယ်ယာအမြောက်အများ၊ စျေးနိမ့်ဖြစ်သည်။ ယူရို ၄၀၀ ကစျေးမကြီးတဲ့အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်း ၇၀၀၊ ၈၀၀၊ ၉၀၀ ယူရိုရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၄၀၀ ကမင်းကိုမပေးနိုင်ဘူး၊ အနိမ့်၊ အလတ်၊ အနိမ့်၊ အလတ်စားအကွာအဝေးတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ခေါ်ချင်တာလား ယူရို ၂၀၀ အောက်မကျတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေယူလာပါတယ်။
KinoConsole ကသင်၏ PC ဂိမ်းများကိုသင်၏ Android ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်သည်